Don’t Click ( 2012 ) - Myanmar Asian TV
ဒီဇာတ်လမ်းလေးဟာ 2012 မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Thriller , Mystery ဇာတ်လမ်း အမျိုးအစားလေးပါ …
Cast တွေ အနေနဲ့ကတော့ Park Bo Young ( Strong Woman Do Bong Soon ) , Kang Byul နှင့် Joo Won တို့က ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ….
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ – online ပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနဲ့ video တစ်ခုကို Jung Mi က သူ့အစ်မ ဖြစ်သူရဲ့ ကောင်လေး Joon Hyuk ကို ထို video file ကို download ဆွဲပေးဖို့ အကူအညီတောင်းပါတယ် …
Jung Mi တစ်ယောက် ထို video file ကို ကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်မှာ ဘယ်လိုထူးဆန်းတဲ့အရာတွေ သူမဆီ ကျရောက်လာမလဲ ? ဘယ်လို အန္တရာယ်တွေ ကြုံတွေ့လာရမလဲ ?
အစ်မ ဖြစ်သူ Se Hee ကလဲ သူ့ညီမလေးကို ဘယ်လိုကယ်တင်မလဲ ဆိုတာကို သည်းထိတ်ရင်ဖို ကြည့်ရှုခံစားရမှာပါ ….
Rating အရ IMDb မှာ 4.7/10 နှင့် MyDramaList မှာ 6.5/10 စသည်ဖြင့် အသီးသီး ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ ….
Translator : Zwe Maun Aung
Actors: Joo Won, Kang Byul, Kang Hae-In, Kim Min-hyuk, Kwon Nam-hee, Lee Marg-Eum, Park Bo-young
Openload.co Myanmar639 MB Download Soliddrive.co Myanmar639 MB Download